ခေါက်ဆွဲကြော်ပုစွန်များနှင့်သံပုရာ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများ "ခေါက်ဆွဲကြော်ပုစွန်များနှင့်သံပုရာ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
ခေါက်ဆွဲကြော်ပုစွန်များနှင့်သံပုရာ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Tele RELAY တစ်ခု3သြဂုတ်လ 2019
ပုစွန်များနှင့်သံပုရာနှင့်အတူခေါက်ဆွဲအဓိကသင်တန်းအဖြစ်ကိုစားနိုင်ပါတယ်။ သို့မဟုတ်ပမာဏပေါ် မူတည်. တဦးတည်းပန်းကန်ထဲမှာ။ သူတို့ကအစ Lactose ကိုသည်းမခံခြင်းနှင့် gluten နှင့်အတူလူများအတွက်သင့်လျော်သောများမှာသငျသညျသငျ့လျြောသောခေါက်ဆွဲဟာ Celiac ကိုရွေးချယ်ပါ။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည်ကလေးများနှင့်လူကြီးများနှစ်ဦးစလုံးမှအယူခံနှင့်ကလေး၏အစားအစာထဲမှာငါးထည့်သွင်းရန်ကောင်းတစ်ဦးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။
မြေတပြင်လုံးသည်ဘောဇဉ်ဖြစ်စေခြင်းငှါ, က wholemeal ခေါက်ဆွဲနှင့်အတူရိုးရာခေါက်ဆွဲကိုအစားထိုးရန်အကြံပြုသည်, အခြေပြု ဂျုံမုန့်ညက် unrefined.
Wholemeal ခေါက်ဆွဲကြောင့်အောင်, ဘိုဟိုက်ဒရိတ်အတွက် (75 100 ထုတ်ကုန်၏ဂရမ်ဂရမ်) မြင့် high-စွမ်းအင်အစားအစာတစ်ဦးကိုယ်ထိလက်ရောက်တောင်းဆိုမှုများလှုပ်ရှားမှုဖျော်ဖြေမတိုင်မီလောင်မှစံပြ။
ဤရွေ့ကား macronutrients, စွမ်းအင်တဖြည်းဖြည်းပြန်လွတ်လာကြောင်းဒါဖြည်းဖြည်း, စုပ်ယူထားကြပါတယ် ဒီအပိုရှည်ဘို့ခဝါသည် feeling သငျသညျစောငျ့ရှောကျကူညီပေးသည်.
အဆိုပါအဆီစားသုံးမှုအလွန်နိမ့်သည်နှင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် စက်ရုံ sterols နှင့်လက်စထရော, ဒါကြောင့်မြင့်မားတဲ့လက်စထရောကိုထိန်းချုပ်ရန်အဆင်ပြေအောင်အစားအစာအတွက်စားသုံးမှုများအတွက်နှလုံးနှင့်သင့်လျော်သောအဘို့ကျန်းမာအစားအစာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်, ဒီပန်းကန်စက်ရုံအမျှင်တစ်ဦးစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာငွေပမာဏပါရှိသည်။ ဤသည်သွေးထဲတွင်လက်စထရောနှင့်ဂလူးကို့စများ၏စည်းမျဉ်းကိုအားပေးအားမြှောက်။
Read more: သန့်စင်ပြီးမုန့်ညက်စားသုံးမှု6အကျိုးဆက်များ
ပုစွန်တစ် crustacean အသွင်အပြင်နှင့်ပုစွန်ဆင်တူမြည်းစမ်းပေမယ့်သေးငယ်နှင့်မဟုတ်တော့အင်တာနာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာစားသုံးနိုင်သောအဘို့ကို၏ 80 100 kcal ဂရမ်များအတွက်ထောက်ပံ့နှင့်မြင့်မားသောရေအကြောင်းအရာနှင့်ပရိုတိန်းရှိပါတယ်။
ဒီထုတ်ကုန်အတော်လေးမြင့်မားတဲ့လက်စထရောများပါဝင်သည်။ အမှန်စင်စစ်တစ်ဦးသောအဘို့ကိုတစ်ဦးကျန်းမာမျှတတဲ့အစားအစာအတွက်အကြံပြုလက်စထရောလ်၏ထက်ဝက်ကိုဖုံးလွှမ်း။ ဖြည့်ညှင်း၌စားခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သောခေါက်ဆွဲအဖြစ်အနိမ့်အဆီပါတဲ့အစားအစာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ကျန်းမာသောအစားအစာများတွင်ထည့်သွင်းရန်ပြဿနာမရှိပါဘူး။
ပုစွန်ထိုကဲ့သို့သောအိုင်အိုဒင်း, သွပ်, ပိုတက်စီယမ်နဲ့ဖော့စဖောရက်အဖြစ်မရှိမဖြစ်သတ္တုဓာတ်မြင့်မားရာခိုင်နှုန်းပါဝင်ပါတယ်။ သူတို့ကအစပမာဏဆံ့ ဗီတာမင် B12 ဤ crustaceans ၏အဘို့ကိုဒီအာဟာရ၏အကြံပြုနေ့စဉ်စားသုံးမှုနှစ်ဆတိုး။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ရှောင်ရှားရန်ငါး6အမျိုးအစားများ
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (4 ကလူ)
ခေါက်ဆွဲ၏ 300 ဂရမ်
ပုစွန်၏ 250 ဂရမ်
ပထမဦးစွာအလတ်စားအပူပေါ်နှစ်ခုဇွန်းတစ်ကြော်ဒယ်အိုးထားအပိုအပျိုကညာသံလွင်ဆီ နှင့်တစ်ကြိမ်အပူချိန်မှာယခင်ကဆေးကြောခြင်းနှင့် peeled ပုစွန်ထည့်ပါ။
7 မိနစ် 10 သို့မဟုတ်အညိုရောင်သည်အထိရန်အဘို့အမုန့်ဖုတ်။ ထို့နောက် သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ခြင်းနှင့်ပိုလျှံအဆီဖယ်ရှားပစ်ရန်စက္ကူလက်သုတ်ပုဝါပေါ်မှာသူတို့ကိုနေရာ.
ထို့နောက်ကြောင်းကဲ့သို့တူညီသောဒယ်အိုးထဲမှာအသီး၏အပိုငျးပိုငျး add, ပုစွန်ပြင်ဆင်ထားရန်ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့သီးဖျော်ရည်ကိုလွှတ်ပေးရန်ကူညီရန်မွှေပေးပါ။
ဤအတောအတွင်း, ရေနံနှင့်ဆားနှင့်အတူရေတစ်လီတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပြုတ်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကို package မှခေါက်ဆွဲရှိသညျအတိုငျးချက်ပြုတ်။
သံပုရာဖျော်ရည်ကိုနှငျထုတျသောအခါ, မီးဖိုချောင်မီးညှပ်နှင့်အတူသူတို့ကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ထို့နောက် ယင်းမုန့်ဒိန်ခဲထည့်ပါ။
သင်တစ်ဦးအသေးစိတ် texture ချင်လျှင်, သင်ခေါက်ဆွဲချက်ပြုတ်ဘို့ရေအနည်းငယ်ဇွန်းထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။
ဆားနှင့်ကြက်သွန်ဖြူအမှုန့်, ပင်စိမ်းနဲ့သံပုရာ zest မြည်းစမ်းထည့်သွင်းဖို့ငရုတ်ကောင်း။ သင့်ရဲ့ပန်းကန်စားရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါ!
သငျသညျ လိုက်. တစ်ပဲပုပ်ပြင်ဆင်မှုနှင့်အတူမုန့်ဒိန်ခဲကိုအစားထိုးနိုင်ပါတယ် သက်သတ်လွတ် နှင့်သည်းမခံသောသို့မဟုတ် Lactose ကိုဒိန်ခဲ။ သင်တို့သည်လည်းအကောင်းဆုံးကိုသင်၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းသောခေါက်ဆွဲရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒီစာရွက်တစ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုပ်သို့မဟုတ်နေ့လယ်စာများအတွက်ဟင်းသီးဟင်းရွက်မုန့်တစ်ခုသို့မဟုတ်အာဟာရများနှင့်ဟန်ချက်ညီညစာအတူကောင်းစွာတတ်၏။
အရသာအီတလီခေါက်ဆွဲချက်ပြုတ်ဘို့3ချက်ပြုတ်နည်းများရှာဖွေတွေ့ရှိ
အီတလီခေါက်ဆွဲသည်ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးလူသိများနှင့်စားသုံးတဲ့အစားအစာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အရသာအီတလီခေါက်ဆွဲချက်ပြုတ်ဘို့3ချက်ပြုတ်နည်းများရှာဖွေပါ။ Read more »
စာမျက်နှာတွေ့မ - သင့်ကျန်းမာရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ
Hummus ကုလားပဲ paprika